Charles Sturt University - Yepamusoro Overseas muAustralia
guta : Bathurst
inotangwa : 1989
Musakanganwa kuti kurukura Charles Sturt University
Kunyoresa pana Charles Sturt University
Charles Sturt University (CSU) chinonzi multi-kembasi paruzhinji yunivhesiti Australian riri muNew South Wales, Victoria, uye theAustralian Capital Territory. dzakasimbiswa 1989, zvakanzi zita rokukudza Captain Charles Sturt, mumwe wokuBritain uyo akaita nzendo munzvimbo New South Wales uye South Australia.
The University ane pazvikoro akawanda muna Albury-Wodonga, Bathurst, Dubbo, Goulburn, Orenji, Port Macquarie, Wagga Wagga andCanberra. The University zvakare hwezvekukurukurirana nyanzvi nzvimbo muna North Parramatta, Manly (Sydney), Broken Hill, Wangaratta uyewoRegional University Study Centres muna Griffith uye Parkes. Courses vari akaponesawo pachiimbwa Study Group Australia inSydney, Melbourne uye Brisbane (kuzivikanwa sezvo CSU Study Centres).
Charles Sturt University inopa siyana Distance Education zvirongwa pana Bachelor uye Post-Graduate pamwero uyewo purogiramu yacho Single Subject Yokudzidza. Charles Sturt University anewo siyana kosi pakukurukura kudyidzana vanoverengeka TAFE masangano munyika.
Charles Sturt University wakazvipikira kuna nounyanzvi hurukuro dzidzo yepamusorosoro uye ane tsime yakatsakatika mukurumbira hwokupa chaizvo dzidzo nekugamuchirwa vakazvitsaurira nyanzvi anobatsira uye akakodzera indasitiri ruzivo. renyanzvi edu anotsigirwa zvakanaka akatsvakurudza zvidzidzo uye madzidzisiro kuti varambe dzakakwirira kwevari kugutsikana pakati kudzidza, Vashandirwi uye yeYunivhesiti shamwari.
CSU dzinogara pokutanga zvikuru nokuda akapedza basa. A ongororo ichangobva kuitwa yakaratidza kuti 81% epamba kudzidza CSU akawana basa mukati memwedzi mina kupedza kwavo tsvimborume dhigirii (2015 Australian Graduate Survey). Charles Sturt University scored soro zvinogoneka, -Nyeredzi shanu Rating dhigirii mudzidzi chengetedzo uye kubudirira kuwana basa (2016 Good Africa Guide). 84.2% vose vakapedza kudzidza vaikwanisa basa renguva yakazara vakanga kubudirira kuwana basa (Graduate Destinations Survey 2012-2014). Vazhinji CSU makosi kupa mukana kubva pagore yokudzidza yokutanga practicum mikana, nechokwadi vadzidzi vari akashongedzerwa kuti vazoita upenyu chaihwo ezvinhu uye vari kuvaka ukama andaitarisira kubvira pakutanga chaipo.
Charles Sturt University makosi dzinokudziridzwa kuitwa muchishanda pamwe chete indasitiri nevamiririri kuti tibu- unyanzvi vakapedza edu wana sangana indasitiri zvinodiwa. Kwete chete vari CSU madhigirii abvumirwa chete akakodzera Australian hurumende uye indasitiri miviri, Masangano aya kushanda pamwe chete University kuti kuchaita kuti CSU vakapedza kudzidza vari indasitiri-vakagadzirira kwose kungashanda ivo.
vadzidzi vose vanokurudzirwa kutarisa zvidzidzo zvavo kubva munyika maonero, muchifunga anekutita, magariro uye zvipenyu zvinhu, izvo zvichaita zvaizoitawo vaudze zvisarudzo upenyu hwavo. Pandaidzidza pana CSU uchadzidza unyanzvi rwauchafamba kure basa rako kuenda, zvakadai kukudzidzisai sei kuva hwose mudzidzi, kukosha rusununguko uye kubatirapamwe, sei kufunga achitsoropodza uye kukurukura pamusoro dzinoverengeka siyana, uye sei kutora runoenderana pakudzidza uye matambudziko.
Rorusununguko Arts uye Dzidzo
The rorusununguko Arts uye Dzidzo rinofukidza zvakawanda makosi pakati Arts uye Education Anoranga.
The Arts Discipline PAKAVHA mapazi eumambo ziso hwemashiripiti, kuita Arts, kukurukurirana, nhoroondo, mabasa evanhu, mabhuku, mafungiro, evanhu, nedzidzo. Schools & Centres zvinosanganisira:
School of Communication uye Creative Industries
School of Humanities uye Social Sciences
Australian Centre nokuti chiKristu uye Culture
Centre nokuti Islamic Sciences uye Civilisation
The dzidzo divi weVadzidzisi Vedare anopa zvakawanda makosi dzidzo mudzidzisi, uye ruzivo uye raibhurari zvidzidzo. Schools zvinosanganisira:
Rorusununguko Business, Justice uye Behavioural Sciences
The rorusununguko Business, Justice uye Behavioural Sciences kunounza pamwe zvakawanda vachiravana, kufunga zvinetso chaizvo-nyika munzvimbo Business, Justice uye Behavioural Sciences nokuranga.
The Business Kuranga ane Garner kutarisirwa vashandirwi hwokubereka kudzidza noukuru zvebhizimisi matambudziko munyika yanhasi. Kwavo kure dzidzo dhigirii miteva / DBA uye Masters mapurogiramu nomwoyo wose kutsvaka-pashure, munyika nepasi rese. The Business Schools uye nzvimbo akwanise vanosanganisira:
School of Accounting uye Finance
School of Computing uye Mathematics
School of Management uye Marketing
The Justice divi weVadzidzisi Vedare anofukidza Policing, chibatiso, mutemo, tsika, excise uye muganhu utariri. Zvikoro uye nzvimbo vanosanganisira:
Australian Graduate School of Policing uye Security
Centre nokuti Tsika uye Excise Studies
Centre Mutemo Nokururamisira
pakupedzisira, ari Behavioural Science kurangwa anoda makosi kubudikidza School of Psychology.
CSU kwakaita rorusununguko Science ndomumwe zvikuru broadly kwakavakirwa nesayenzi kwomudzidzi kuwanda mu Australasia. Schools zvinosanganisira:
School of Agricultural uye Wine Sciences
School of Animal uye Veterinary Sciences
School of anorapa achishandisa mitemo Sciences
School of Dentistry uye Health Sciences
School of Exercise Science, Sport uye Health
School of Nursing, Kusununguka uye Indigenous Health
Charles Sturt University kwakatangwa 1 Chikunguru 1989 kubva kwemapazi anoverengeka huripo yoga-raitongwa Colleges of Education Advanced kusanganisira Mitchell College of Education Advanced muna Bathurst, ari Riverina-Murray Institute Yepamusoro Redzidzo Albury-Wodonga uye Riverina College of Education Advanced muna Wagga Wagga, kubudikidza enactment The Charles Sturt University Act, 1989 (Act No. 76, 1989). Zvinonzi anonzi vachikudza aiongorora Charles Sturt.
The Mitchell College of Education Advanced rakanga raumbwa pamusoro 1 Ndira 1970, uye Riverina Murray Institute of Education kembasi muna Wagga Wagga uye Albury-Wodonga akanga vakavhiyiwa kubva 1984. Ekupedzisira inisitichusheni akanga abudirira ari Riverina College of Education Advanced, waiva pacharo mugumisiro ane kunyange yapfuura batanidzo pakati Wagga Agricultural College uye Wagga Wagga Teachers College.
mu 1998, CSU akasimbisa wokutanga Study Centre muSydney uye tobva Melbourne muna 2007. Izvi nzvimbo dzokudzidza dziri kushanda ne boka dzidzo voga inonzi Study Group Australia.
On 1 Ndira 2005, CSU formalized runoita kuti tisafunge kudzora University of Sydney kwakaita Orange kembasi, vakasvika simba pamusoro 1 Ndira 2005. mu 2013 Yunivhesiti chinozoiswa gasi injini cogeneration simba chirimwa kubatsira kuderedza mafuta mari uye kabhoni choutsi.
pakati 2005 uye 2015, CSU akanga kuwedzera ane pemvura kembasi muna Burlington, Ontario muCanada. On July 2015, CSU regretfully kurega kushandisa yayo Ontario kembasi nokuda zvemitemo uye pamutemo ezvinhu Ontario.
On 14 Kukadzi 2011 CSU change Logo wayo. The sturt mugwenga pizi ruva zvino stylized uye akaita akakurumbira, pamwe nezita zvizere yunivhesiti sezvo chikamu chacho Logo.
On 1 Chivabvu 2012, rinokosha akanga asvika sezvo CSU akavhura kembasi idzva Port Macquarie, CSU wokutanga kumahombekombe, zvenharaunda kembasi. Izvi akaita Yedzidzo Yepamusorosoro nyore kuna Port Macquarie uye Hastings nharaunda. Inopa nemikana vadzidzi pamwe chido kudzidza pedyo pamahombekombe, uyewo nzira yokuti vadzidzi dzomunharaunda kuwana pfuma yenyika-kirasi yunivhesiti pedyo kumba.
On 18 Kubvumbi 2016, tsvimbo uye vadzidzi ndanogara Stage Mumwe wavo chinangwa vakavaka kembasi. mumatanho maviri vanotarisirwa kuva wakakwana kwemakore anouya aine kutarisirwa mudzidzi yaunodya pamusoro 5000 mugore 2030.
Unoda kurukura Charles Sturt University ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Charles Sturt University iri Map
Photos: Charles Sturt University pamutemo Facebook
Charles Sturt University wongororo
Join kukurukura Charles Sturt University.